Winches, Camping Gears, Vehicle Fiarovana, Recovery fitaovana - TS Winch
Sambo sy Winches tanana
Roof lay & eloelonao
Aoriana Bars & Towing Accessories
Recovery fitaovana & andilany
Ary mbola hanohon lapelina
Bow & Soft tongony
Jacks & nanandratra Fitaovana
Sakano amin'ny rivotra
JEREO inona koa ataontsika
Zhejiang TS Winch Tools Manufacturing Co., Ltd efa tafiditra amin'ny orinasa mpamokatra entana, sy ny fanondranana winches isan-karazany sy 4 × 4 Accessories ho 12 taona mahery. Indrindra izahay mamokatra ny winches avy amin'ny 2000lbs ho 17500lbs, famerenana andilany, fasika lalamby, omby bara hidiny sy Recovery Kits. Foana izahay teny an-dalana ho any fampandrosoana ny vaovao 4 × 4 Accessories ho an'ny vaovao kodiarana efatra hazakazaka fiara sy ny eny-dalana fiara.
Ny fanoloran-tena dia ny hanomezana vahaolana fiara sy ny entana sarobidy be ny mpanjifa amin'ny alalan'ny vokatra avo lenta sy ny asa fanompoana. Fanorenana matoky fifandraisana amin'ny mpiara-miasa amin'ny rehetra "ambony toetra & vidiny mirary".
Tongasoa eto amin'ny hitsidika antsika na OEM avy amin'ny orinasa. Isaky ny mila tanana ianao, na manana fanontaniana mikasika misy ny vokatra, dia afaka manampy anao hamaritra ny tsara indrindra fitaovana ho an'ny zavatra ilaina.
4x4 Recovery fitaovana
Winch vaovao 12000 / 13500lbs tantera-drano feno ...
Mifanaraka amin'ny jack / shovel / fanarenana hi hi ...
Ahoana ny fomba ahafahana mampiditra winch amin'ny fiaranao
Tsy misy atahorana, handresy amin'ny ady NCP isika!
Jindong Industrial Area, Jinhua City, Zhejiang, Sina
Niantso anay izao: 13085656052
4x4 winch , kamiao winch, Recovery Winch , SUV Winch, herinaratra winch, Synthetic tady Fa Winch,